Inona avy ireo tombony azontsika raisina avy amin'ny famenon'ny PEA?
Nisy ny tatitra fa nankatoavin'ny Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina ny fangatahana fitsapana ara-pitsaboana hitsaboana COVID-19 amin'ny alàlan'ny fampiasana fanafody syntetika izay maka tahaka ny asan'ny molekiola iray hita ao amin'ny marijuana.
Ny zava-mahadomelina sentetika, antsoina hoe palmitoylethanolamide ultramicronized (micro PEA), dia inoana ho toy ny anti-inflammatoire. Palmitoylethanolamide (PEA) dia "asidra matavy voajanahary" mitovy amin'ny endocannabinoid, iray amin'ireo karazana molekiola hita ao amin'ny rongony izay kendrena ireo mpandray CB2. Ny mpandray CB2 dia heverina fa manova ny fivontosana sy ny fanaintainana manerana ny vatan'olombelona.
Hatramin'ny nampiasana [micro PEA] tany Eropa nandritra ny 20 taona, nisy mpikarakara fitsaboana Italiana sasany nanohana ny fampiasana micro PEA hitsaboana ireo marary COVID-19 ary nahita fahombiazana vitsivitsy izy ireo.
COVID-19 mafy dia miavaka amin'ny valin'ny fivontosana tafahoatra izay mety hitarika amin'ny tadin'ny cytokine. "Ny micro PEA dia tsy mpamono otrikaretina, saingy mino izy ireo fa afaka manalefaka ny valin'ny fiarovan-tena izay mety hahafaty.
Palmitoylethanolamide (PEA) dia lipida iray izay mivoaka voajanahary ao amin'ny vatantsika amin'ny sokajy asidra amide matavy. Avy eo dia lipida faran'izay miafina izy io. PEA voajanahary koa ao amina zavamaniry sy biby.
Ny Palmitoylethanolamide (PEA) dia hita amin'ny sakafo toy ny ronono, tsaramaso, voanjo, lecithin soja, hena, atody ary voanjo.
Ilay mpandresy tamin'ny loka Nobel Levi-Montalcini dia nanondro an'i Palmitoylethanolamide (PEA) ho molekiola misy voajanahary, mamaritra ny lanjan'izany amin'ny fitsaboana ny aretina mitaiza sy ny fanaintainana. Taorian'ny nahitana azy, fanadihadiana siantifika an-jatony no natao mba hampisehoana fa tena mandaitra sy azo antoka ampiasaina izany. Ny Palmitoylethanolamide (PEA) dia faritana amin'ny asa soratra siantifika a fanafody fanaintainana voajanahary.
Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovoka Palmitoylethanolamide (PEA)
Palmitoylethanolamide tombontsoa - Inona no ilana an'i Palmitoylethanolamide?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia amida asidra matavy ary atambatra ary miasa ao anatin'ny vatantsika ho amin'ny fifehezana ny asa isan-karazany. Izy io dia amide asidra matavy endogenous, an'ny sokajin'ny agonista nokleary. Palmitoylethanolamide (PEA) dia tena hita marobe amin'ny maodely biby mamaivay marobe, miaraka amin'ny fitsapana ara-pitsaboana maro.
Fanaintainana voajanahary izy io ary azo ampiasaina amin'ny fanaintainana maharitra sy ny fivontosana. Izy io koa dia misy fiantraikany mahasoa hafa toy ny fanaintainan'ny neuropathique, fibromyalgia, sclerose maromaro, ratra miverimberina, aretin'ny lalan-dra, ary aretina maro hafa.
Misy ny tombony azo avy amin'ny palmitoylethanolamide voalaza;
i. Manohana ny fahasalaman'ny ati-doha
Ny Palmitoylethanolamide dia mandray soa amin'ny fampivoarana ny fahasalaman'ny atidoha dia miaraka amin'ny fahafahany miady amin'ny fivontosana neural ary koa ny fampiroboroboana ireo sela neural. Io dia marihina kokoa amin'ny olona voan'ny aretin'ny neurodegenerative sy ny stroke.
Ohatra, tamin'ny fanadihadiana ny olona 250 tratry ny lalan-dra, ny suplement Palmitoylethanolamide notanterahina niaraka tamin'ny luteolin dia hita fa manatsara ny fahasitranana. Ny PEA dia nahitana fanatsarana ny fitadidiana, ny fahasalaman'ny ati-doha amin'ny ankapobeny ary koa ny fiasan'ny isan'andro. Ireo vokatry ny vovoka palmitoylethanolamide dia tsikaritra 30 andro aorian'ny famenony ary nitombo iray volana mahery.
ii. Mialà amin'ny fanaintainana sy ny fivontosana
Ny mpahay siansa dia manome porofo marobe momba ny fananana fanaintainana palmitoylethanolamide. Raha ny zava-misy, ny palmitoylethanolamide dia manolotra fanaintainana amin'ny fanaintainana sy fanaintainana maro samihafa. Ny fikarohana sasany izay mampiseho ny palmitoylethanolamide fanaintainana fanaintainana dia;
Ao amin'ny fanadihadiana misy biby, famenon-tsakafo palmitoylethanolamide miaraka amin'ny quercetin dia hita fa manolotra fanamaivanana amin'ny fanaintainana miaraka ary koa manatsara ny fiasan'ny fiaraha-miasa sy ny fiarovana ny tazomoka amin'ny fahasimbana.
Ny fandinihana natao voalohany dia mampiseho fa afaka manampy ny fampihenana ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny marary amin'ny diabeta (neuropathy diabeta) ny PEA.
Ao amin'ny fandinihana iray hafa misy olona 12, ny dosage palmitoylethanolamide 300 sy 1,200 mg / andro nomena mandritra ny 3 hatramin'ny 8 herinandro dia hita fa hampihena ny hamafin'ny fanaintainan'ny aretin-tsaina sy ny neuropathic.
Ny fandinihana ny marary 80 izay mijaly amin'ny Fibromyalgia syndrome dia nahitana fa ny PEA ankoatry ny fanafody hafa ho an'ny aretina dia mety hampihena ny fanaintainana.
Ankoatr'izay, fandalinana maro hafa dia mampiseho ny mety ho fanaintainana ny palmitoylethanolamide anisan'izany ny fanamaivanana ny fanaintainan'ny pelvika, ny fanaintainan'ny sciatic, ny fanaintainan'ny lamosina, ny fanaintainan'ny homamiadana.
iii. Manampy amin'ny fampihenana ny soritr'aretin'ny fahaketrahana
Ny PEA dia mitaona ireo mpitsabo mandray andraikitra amin'ny toe-tsaina tsy mivantana. Ny fandinihana sasany dia mampiseho palmitoylethanolamide fanalefahana ny tebiteby ho anjara andraikitra lehibe amin'ny ady amin'ny fahaketrahana.
Ao amin'ny fandinihana ny marary 58 izay manana fahaketrahana, ny palmitoylethanolamide fanampiny amin'ny 1200 mg / andro miaraka amin'ny fanafody antidepressant (citalopram) izay notanterahina nandritra ny 6 herinandro dia hita fa nanatsara ny toe-po sy ny soritr'aretin'ny fahakiviana ankapobeny.
iv. Manala ny sery mahazatra
Mahasoa ny palmitoylethanolamide amin'ny fiadiana amin'ny hatsiaka mahazatra ny fahafahany manapotika ny viriosy tompon'andraikitra amin'ny hatsiaka mahazatra (virus influenza). Mahagaga fa mitranga ny hatsiaka mahazatra ary miantraika amin'ny saika ny olona rehetra indrindra fa ny olona manana hery fiarovana.
Ny fandinihana iray niaraka tamin'ny miaramila tanora 900 dia nanaporofo fa ny dosage palmitoylethanolamide 1200 mg isan'andro dia mampihena ny fotoana nalain'ny mpandray anjara amin'ny fanasitranana amin'ny hatsiaka ary koa ny soritr'aretina toy ny aretin'andoha, tazo ary tenda mafy.
v. Mampidina ny soritr'aretin'ny sclerose insular (marobe)
Miaraka amin'ny fananana anti-inflammatory manaporofo palmitoylethanolamide dia azo antoka fa mety ny PEA amin'ny fitsaboana ny sclérose marobe.
Ao amin'ny fandinihana ny marary 29 izay mijaly amin'ny sclérose maro be dia be, ny PEA dia nanampy ny fatran'ny mahazatra interferon IFN-β1a dia hita fa hampihena ny fanaintainana ary koa manatsara ny kalitaon'ireo marary.
vi. Palmitoylethanolamide dia manatsara ny metabolisma
Palmitoylethanolamide (PEA) dia afaka mifamatotra amin'ny PPAR- α, mpandray iray tompon'andraikitra amin'ny metabolisma, ny fahazotoan-komana, ny fihenan-danja ary ny fandoroana tavy. Rehefa tratra ny receptor PPAR- α dia mahatsapa haavon'ny angovo avo ianao izay manampy ny vatana handoro tavy bebe kokoa amin'ny fanazaran-tena noho izany dia mampihena ny lanjanao.
vii. Palmitoylethanolamide dia afaka mampihena ny filanao sakafo
Ny fatiantoka enta-mavesatra Palmitoylethanolamide dia aseho amin'ny fahaizany hitaona ny filanao. Mitovitovy amin'ny fanamafisana ny metabolisma, rehefa ampiharina ny mpandray anjara amin'ny PPAR-α dia mitarika fahatsapana ho feno, raha mihinana toy izany dia manampy anao hifehezana ny habetsaky ny kaloria levona.
Ankoatr'izay, ny PEA dia raisina ho toy ny ethanolamide asidra matavy izay manana anjara toerana lehibe amin'ny famahanana ny fitondran-tena. Tao anatin'ny fandalinana ny voalavo voatsindrona tamin'ny lanjany be dia be, ny fametrahana PEA amin'ny lanjan'ny vatana 30 mg / kg mandritra ny 5 herinandro dia hita fa mampihena be ny fihinanana sakafo, sela matavy ary vokatr'izany ny lanjan'ny vatana.
viii. Palmitoylethanolamide fiantraikany fanoherana ny inflammatoire mandritra ny fanatanjahan-tena
Ny iray dia mety hiaina fanaintainana sy fivontosana mandritra sy aorian'ny fampiofanana noho ny lanjany be loatra. Eny, ny fanampiana PEA dia afaka manampy amin'ny fisorohana izany amin'ny alàlan'ny fanentanana ny hetsika anti-inflammatoire an'ny mpandray ny PPAR- α. Palmitoylethanolamide koa dia afaka manakana ny famoahana anzima mamaivay ao amin'ny vatan'ny adipose olombelona.
Iza no tokony haka fanampiny amin'ny Palmitoylethanolamide (PEA)?
Palmitoylethanolamide (PEA) fanampiny dia mendrika ho an'ny rehetra mijaly amin'ny fanaintainana ratsy na fanaintainana ary koa izay liana amin'ny fatiantoka mavesatra na amin'ny fanafody na tsia. Ny PEA dia hita fa hanatsara ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina hafa. Safidy io ho an'ireo izay tsy mahita fanamaivanana amin'ny fampiasana ireo mpamono fanaintainana voatondro.
Fanamaivanana ny fanahiana Palmitoylethanolamide toetra tsara dia tsara izay olona atahorana ho ketraka na mijaly amin'ny fahaketrahana dia tokony handray PEA.
Ankoatr'izay, ny iray dia hijinja bebe kokoa ny PEA amin'ny famatsiana satria ny orinasa dia mitady formules izay mampitombo ny bioavailability ho an'ny palmitoylethanolamide.
Inona no azon'ny PEA?
PEA voajanahary ao amin'ny vatantsika ary koa biby sy zavamaniry. Na izany aza, ho an'ny olona voan'ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny aretin-tsaina, na ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny PEA dia tsy ampy ny habetsahan'ny PEA, ka ilaina ny famatsiana PEA.
Ny Palmitoylethanolamide dia azo alaina avy amin'ny loharanon'ny sakafo manankarena amin'ny proteinina toy ny ronono, hena, tsaramaso, soja lecithin, voanjo ary voanjo zaridaina hafa. Na izany aza, kely ny PEA azo avy amin'ny loharanom-pahalalana. Izany dia mahatonga ny famokarana palmitoylethanolamide betsaka ilaina amin'ny famitana izany filan'ny sakafo izany.
Phenethylamine sy Palmitoylethanolamide dia samy afaka miantso PEA, saingy samy hafa tanteraka ny vokatra.
Phenethylamine (PEA) dia fitambarana voajanahary, alkaloid monoamine voajanahary, ary amine trace, izay miasa amin'ny rafi-pitabatabana afovoan'ny olombelona. Ny Phenethylamine dia mandrisika ny vatana hanao zavatra simika sasany izay mitana andraikitra amin'ny fahaketrahana sy ny toe-tsaina hafa.
Raisina amina fatra 500mg-1.5g isaky ny fatra, isaky ny ora vitsy, ny PEA dia manome ny fahafaham-po ho an'ny mpampiasa, ny angovo, ny fanentanana ary ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.
Na izany aza, mariho tsara fa Phenethylamine (PEA) dia tsy Palmitoylethanolamide (PEA). Ny famenon-tsakafo Phenethylamine dia tsy nankatoavin'ny FDA hampiasaina amin'ny fitsaboana. Palmitoylethanolamide (PEA) dia zavatra voajanahary vokarin'ny vatana; tena mandaitra sy azo antoka ampiasaina ho famenony ny fanaintainana sy ny fivontosana.
PEA ve supplement azo antoka?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia zavatra voajanahary vokarin'ny vatana; tena mandaitra sy azo antoka ampiasaina ho famenony ny fanaintainana sy ny fivontosana. Tsy misy voka-dratsy ateraky ny palmitoylethanolamide ary koa ny fifandraisana ratsy amin'ny fanafody hafa.
Tsy misy ny vokany ratsy na ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina voalaza hatreto. Palmitoylethanolamide dia azo alaina miaraka amin'ny fanafody hafa. Manatsara ny fihenan'ny alahelon'ny analgesika mahazatra sy ny anti-inflammatories izy io.
Tsy tokony hampiasain'ny vehivavy bevohoka.
Palmitoylethanolamide dia mety hanampy amin'ny famahana ny otrikaretina sy ny fanaintainana maharitra.
Tokony horaisina eo ambany fanaraha-mason'ny mpitsabo fotsiny izany.
Palmitoylethanolamide antsasak'aina - Hafiriana no mety hiasana ny voanjo?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia azo alaina miaraka amin'ny fanafody fanaintainana hafa na irery, araka ny torohevitra nomen'ny mpitsabo anao, hanohanana ny fanaintainana.
Ny fahombiazan'ny fanamaivanana ny fanaintainana dia 8 ora
Miovaova ny valiny; valiny ao anatin'ny 48 ora amin'ny olona sasany, fa ampiasaina mandritra ny 8 herinandro ho an'ny valiny farany ambony, dia azo ampiasaina maharitra amin'ny fanaintainan'ny neurolojia maharitra.
Palmitoylethanolamide miasa koa ankolaka mba hitaomana ny fihetsiky ny sasany mpandray toy ny receptor cannabinoid. Ny PEA dia manentana ankolaka ireo mpitsabo mpanampy cannabinoid (CB1 sy CB2) amin'ny alàlan'ny fiasa ho toy ny anzima (FAAH -fatty acid amide hydrolase) voarohirohy amin'ny famotehana ny anandamide cannabinoid. Izany dia manampy amin'ny fampiakarana ny haavon'ny anandamide ao amin'ny vatantsika, izay tompon'andraikitra amin'ny fitsaharana sy amin'ny ady amin'ny fanaintainana.
Inona ny PEA hanamaivanana ny fanaintainana?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia zavatra voajanahary vokarin'ny vatana; Izy io dia amide asidra matavy endogenous, an'ny sokajin'ireo agonista nokleary, ary azo ampiasaina ho fanampiana ny fanaintainana sy ny fivontosana. Ny PEA dia molekiola voajanahary, miaro, matavy novokarina tao amin'ny vatantsika, manampy amin'ny fanohanana ny saron'ny nerve myelin ho an'ny fiasan'ny hozatra tsara.
PEA dia asidra matavy izay tafiditra amin'ny asan'ny sela isan-karazany amin'ny fivontosana sy ny fanaintainana maharitra, ary naseho fa manana neuroprotective, anti-inflammation, anti-nociceptive (anti-pain) ary anti-convulsant. Izy io koa dia mampihena ny fivezivezena amin'ny gastrointestinal sy ny fihanaky ny sela homamiadana, ary koa ny fiarovana ny endothelium vascular ao amin'ny fo ischemika. Matetika amin'ny olona manana aretina mitaiza dia tsy mamokatra PEA ampy ny vatana, noho izany ny fandraisana PEA ho famenon'ny tsy fahampian'ny vatana dia mety hahasoa amin'ny fanampiana ireo fitsaboana ireo.
Anti-inflammatoire ve i Pea?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia zava-mahadomelina mahaliana manohitra ny inflammatoire ary mety hanana fampanantenana lehibe ihany koa amin'ny fitsaboana aretina maro (auto), anisan'izany ny aretin'ny tsinay sy ny aretin'ny CNS.
Tsara amin'ny aretin-tratra ve ny pea?
Palmitoylethanolamide (PEA) dia manome tombony ho an'ny vanin-taolana, amin'ny resaka fampihenana ny fivoarana sy ny fikojakojana ny fanaintainana maharitra, fa koa hanampiana ny famerana ny fandrosoan'ny fandringanana iraisana mifandraika amin'ny aretin-tratra.
Inona avy ireo fanafody fanaintainana tsara indrindra amin'ny fanaintainan'ny nerve?
Ny PEA (palmitoylethanolamide) dia efa nisy nanomboka ny taona 1970 fa nanjary nalaza ho toy ny masoivoho vaovao amin'ny fitsaboana ny fivontosana sy ny fanaintainana. Tsy nisy ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina na ny vokany ratsy.
Ny PEA dia molekiola matavy izay manampy amin'ny fanohanana ny fonon'ny myelin ho an'ny fiasan'ny hozatra tsara.
Ny tsy fahampian'ny vitamina avy amin'ny vondrona B dia tsy hoe miteraka fanaintainan'ny hozatra fotsiny, fa mampitombo azy io koa.
Ny soritr'aretina fanampiny tsy mahafinaritra dia mety hitranga ihany koa, toy ny fivezivezena goavambe, fikolokoloana sy fanindronan'ny tanana sy tongotra, fahatsapana toy ny hoe mandeha amin'ny tariby misy bararata na volon'ondry na koa mamofona ny
tanana sy tongotra.
Ny vitamina B1 kely loatra dia mitarika fikorontanana amin'ny fiasan'ny hozatra ary vokatr'izany amin'ny fanaintainan'ny neuropathie sy ny hozatra. Rehefa manampy vitamina B1 dia mihena ny fanaintainana ary mihatsara ny fiasan'ny hozatra. Ny vitamina B1 dia azo raisina miaraka amin'ny PEA, izany dia manome fanohanana tsara indrindra amin'ny fiasan'ny hozatra, manakana ny fanaintainan'ny hozatra na fanaintainana miharatsy. Ny fandinihana natao tato ho ato dia nampiseho fa maro ny olona manaintaina lava, ny be antitra ary ny diabeta no manana tsy fahampian'ny habetsahan'ireo vitamina ireo amin'ny rany. Izany no iray amin'ireo antony mahatonga ireo olona ireo tsy ho afaka hitsabo afa-tsy amin'ny fanafody fanaintainana; ilain'izy ireo
mihoatra izany. Ny vitamina PEA miampy B dia manohana ny rafi-pitatitra sy ny hery fiarovan'ny vatana raha sendra fanaintainan'ny hozatra.
Cannabinoid ve i Palmitoylethanolamide?
CBD (Cannabidiol) dia tamboho nalaina tamina hemp sy rongony. Raha mamokatra cannabinoids ara-boajanahary ny vatana, dia novidiana ny singa CBD mba hanomezana izay filàna.
Cannabinoids dia simika mavitrika biolojika novokarina tao amin'ny vatana izay tompon'andraikitra amin'ny fahatsiarovana, ny fanaintainana, ny fiterahana ary ny hetsika. Ny mpahay siansa dia maminavina fa ny cannabinoids dia mety mahasoa amin'ny fampihenana ny ho ratra sy ny tebiteby, ny famotehana ireo sela homamiadana, ny fialan-tsasatra amin'ny hozatra ary manatsara ny filàna.
Ny PEA dia amide asidra matavy amidy ao anaty vatana ary azo antsoina hoe cannabimimetic. Midika izany fa manao tahaka ny asan'ny CBD ao amin'ny vatanao izy.
Samy miasa an-kolaka ny CBD sy ny PEA amin'ny alàlan'ny fanakanana ny asidra amide hydride hydrolase (FAAH), izay mazàna manimba anandamide ary mampalemy azy. Izany dia miteraka haavon'ny anandamide avo lenta. Anandamide mitana andraikitra lehibe amin'ny toe-tsaina ary koa manentana. Ny fitomboan'ny haavon'ny anandamide dia misy fiantraikany tsara amin'ny rafitra endocannabinoid.
Nahazo laza ny PEA ary nifaninana tamin'ny CBD. Ny PEA dia heverina ho safidy azo antoka kokoa ho an'ny CBD noho ny olana ara-dalàna atrehana ary koa ny tsy fahitan'ny ankamaroan'ny olona ny ‘vato’ avo lenta avoaka miaraka amin'ny CBD.
Ankoatr'izay, ny PEA dia mora vidy kokoa noho ny CBD. Na izany aza, ny PEA dia azo ampiasaina ankoatry ny CBD hahazoana vokatra synergetika.
Pea dia endocannabinoid?
TSIA, Palmitoylethanolamide (PEA) dia mpanelanelana amin'ny lipida endocannabinoid izay manana toetra analgesika sy anti-inflammatoire. Ny PEA dia manohana ny ECS amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny endocannabinoid signal ary ny fampidirana ankeriny ireo receptor cannabinoid.
Ny rafitra endocannabinoid (ECS) dia rafitra biolojika manan-danja izay mifehy sy mandanjalanja ny asan'ny fisiolojika marobe ao amin'ny vatana. Ny fikarohana momba ny ECS dia nahatonga ny famantarana ireo endocannabinoids toa anandamide (AEA) sy 2-arachidonoylglycerol (2-AG), fa koa ny mpanelanelana lipid toy ny endocannabinoid toy ny palmitoylethanolamide (PEA). Ireo fangaro endocannabinoid ireo dia matetika mizara làlam-metabolika mitovy amin'ny endocannabinoids fa tsy manana firaiketam-po mifamatotra amin'ny receptor kilasin'ny cannabinoid mahazatra 1 sy ny karazany 2 (CB1 sy CB2).
Palmitoylethanolamide (PEA) sy Anandamide
Palmitoylethanolamide sy anandamide dia mifandray akaiky satria izy ireo dia asidra amidy matavy endogenous vokarina ao amin'ny vatana.
Ny PEA sy ny anandamide dia voalaza fa misy fiantraikany synergistic amin'ny fitsaboana fanaintainana ary koa manatsara ny mpamono fanaintainana ampiasaina.
Izy ireo koa dia potipotehin'ny angovo hydrolase matavy amina vatana, noho izany ny vokatra dia tanterahina rehefa ampiasaina miaraka dia mihoatra noho ny ampiasaina amin'ny menaka mandry.
Phenethylamine singa simika izay vokarina amin'ny vatana. Izy io dia ampiasaina betsaka amin'ny fanatsarana ny fampisehoana atletika ary koa afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny famoizam-po, fanampiana amin'ny fihenan'ny lanjany ary hanatsara ny toe-po.
Palmitoylethanolamide etsy ankilany dia amide asidra matavy izay fanta-daza noho ny fanaintainana sy ny fanaintainana mamaivay.
Tsy mifandraika ireo roa ireo. Ny hany mampifandray azy ireo dia voatazona ho PEA daholo.
Ahoana no fomba handraisako ny fanampin-tsakafo Palmitoylethanolamide (PEA)?
Na dia nantitranterinay aza ny tombontsoa azo avy amin'ny palmitoylethanolamide amin'ny tombontsoa hafa, mendrika ny hitondra ny sainao amin'ny zava-misy bebe kokoa momba ny PEA. Ny PEA dia mitranga amin'ny ampahany lehibe ary tsy misy rano ao anaty rano, izany no mahatonga ny palmitoylethanolamide bioavailability sy ny fidirana tena.
Ny vaovao tsara kosa dia ny famokarana lasibatra mpamorona izay manatsara ny fahalalahan'ny palmitoylethanolamide ho an'ny fampiasana ambony indrindra amin'ny vatanao. Ho an'ireo, Vovoka PEA dia misy amin'ny endrika vovoka mahazatra sy endrika vovoka micromized.
Aiza no hividianana vovoka Palmitoylethanolamide (PEA)?
Ao anatin'ny vanim-potoana mahaliana isika izay fivarotana an-tserasera dia lasa fivarotana tokana ho an'ny zava-drehetra ao anatin'izany ny famatsian-tsakafo palmitoylethanolamide. Raha mieritreritra ny handray PEA ianao, manaova fikarohana betsaka ho an'ireo mpamokatra famenon-tsakafo palmitoylethanolamide legit. Ny ankamaroan'ny mpampiasa palmitoylethanolamide dia mividy azy amin'ny magazay an-tserasera ary tokony handinika ny hevitr'izy ireo momba ny vovo-tany PEA tsara indrindra eny an-tsena.
CB1: receptor karazana Cannabinoid I
CB2: receptor Cannabinoid karazana II
CENTRAL: fisoratana anarana afovoan'i Cochrane fanandramana voafehy
FAAH: hydrolase amide-asidra améty
NAAA: asidra hydrolisisam-hydrolisis N-acylethanolamine
PPARα: alpha receptor activated peroxisome alpha
PRISMA-P: Ireo zavatra ilaina amin'ny fanaovana tatitra momba ny fanaraha-maso sy ny moto-analysis Protocols
VAS Pain: Scale Analog Visual ho an'ny fanaintainana
ECS: rafitra endocannabinoid
 Artukoglu BB, Beyer C, Zuloff-Shani A, et al. Ny fahombiazan'ny palmitoylethanolamide amin'ny fanaintainana: famakafakana meta. Dokotera fanaintainana 2017; 20 (5): 353-362.
 Schifilliti C, Cucinotta L, Fedele V, et al. Ny palmitoylethanolamide micronized dia mampihena ny soritr'aretin'ny fanaintainan'ny neuropathique amin'ny marary diabeta. Pain Res Treat 2014; 2014: 849623.
 Keppel Hasselink JM, Hekker TA. Fitaovana fitsaboana ny palmitoylethanolamide amin'ny fitsaboana ny fanaintainan'ny neuropathique mifandraika amin'ny toe-piainana isan-karazany: andiany tranga. J Pain Res 2012; 5: 437-442.
 Keppel Hasselink JM, Kopsky DJ. Ny andraikitry ny palmitoylethanolamide, autacoid, amin'ny fitsaboana simika amin'ny hozatra: tatitra tranga telo sy famerenana literatiora. J Clin Case Rep 2016; 6 (3).
 Costa B, Colombo A, Bettoni I, Bresciani E, Torsello A, Comelli F. Ny ligand palmitoylethanolamide dia manala ny fanaintainan'ny neuropathique amin'ny alàlan'ny sela mast sy ny fanodinana microglia. Symposium fanao isan-taona faha-21 an'ny Fikambanana Fikarohana Cannabinoid Iraisam-pirenena. St. Charles, Il. Usa: Pheasant Run; 2011.
1. Topimaso topy Palmitoylethanolamide (PEA)
2.Inona ny Palmitoylethanolamide (PEA)?
3. Tombony Palmitoylethanolamide - Inona no ilana Palmitoylethanolamide?
4. Iza no tokony haka fanampiny amin'ny Palmitoylethanolamide (PEA)?
5. Ahoana no fiasan'ny PEA amin'ny fanaintainana?
6.Ny Palmitoylethanolamide dia cannabinoid?
7.Inona no alaiko ny fanampian'i Palmitoylethanolamide (PEA)?